Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadbaban ee heer Federal – Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban
Home &sol; Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadbaban ee heer Federal
XILALKA IYO WAAIIBAADKA GUDDIGA FEDERAALKA HIRGELINTA DOORASHOOYINKA DADBAN EE 2016
Guddiga Federaalka ee Hirgelinta Doorashooyinka (GFHDD)
Madaxda Madasha Hoggaanka Qaran waxay l2-‘kii April 2016 warmurtiyeed ku soo saareen go’aan ah in hannaanka doorashadu uu noqdo mid isku mid ah, Waxaa hannaanka hirgelin doona guddiyo isku-dhafan oo laba beer ah oo kala ah: Guddiga Federaalka cc Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) iyo Guddiga Dawlad Goboleedka ee llirgelinta Doorashooyinka Dadban (GDGHDD) oo ay yeelaneyso mid kasta oo ka mid ah Dowlad Goboleedyada Federaalka ee hadda jira iyo kuwa sameysmaya.
Sidoo kale, Madasha Hoggaanka Qaran waxay go’aamisay in Guddiga GFHDD uu ka koobnaado 22 xubnood oo farsamoyaqaanno ah, oo toban (10) ka mid ah ay soo magacaabi doonto Dowladda Federaalka ah, haiku min laba (2) xubnoodna ay soo magacaabi doonaan mid kasta oo ka mid ah dowlad goboleedyada federaalka ee hadda jira/sameysmaya.
Guddiga GFHDD waa in ay ka mid noqdaan ugu yaraan 30% dumar ah.
Muddada xilhavnta Guddia GFIIDD waxav ku e tahav doorashoovinka 201 6-ka
Xilalka iyo Waajibaadka
Giuddiga GFHDD wuxuu mas’uul ka yahay guud ahaan korrneerka hannaanka doorashada iyo xaqiijinta in ay si isku mid ah u dhacdo. Guddiga GFHDD waa hay`adda ugu sarreysa cc kormeerka hannaanka doorashada 2016.
Xilalka iyo Waajibaadka waxaa ka mid ah:
Guddiga GFHDD waa in uu soo saara hab-raaca) ada doorasho sida; shuruudaha laga rabo murashaxiinta, ogolaanshaha xubnaha korjoogtada doorashada (beer caalami io beer qaran), iyo wacyigelinta bulshada.
Guddigu wuxuu layaway kormeeridda, tababarka iyo in uu kaalmeeyo Guddiyada Doorashooyinka cc Dawlad Goboleedyada.
Samaynta anshaxa habdhaqanka hannaanka doorashada.
Hubinta Habraaca ay ku yimaadeen xubnaha ergooyinka doorashada, musharaxiinta, iyo ku dhawaaqidda natiijada.
Qaabaynta iyo daabacaadda waraaqaha codbixinta.
Sidoo kale guddigu waxa uu masuul ka yahay arrimahan soo socda:
Hubinta qoondada hawcenka (30%) ee labada aqal ee Barlamaanka.
Hubinta in ay ugu yaraan kursi walba isku soo taagaan laba tartame.
Shaqaalaysiinta howlwadeennada lagama maarmaanka u ah fulinta howlaha guddiga GFHDD.
Turxaan bixin halkii looga baahdo
Hubinta iyo la shaqaynta liiska Odey Dhaqameedyada 135-ka ah ee ay saxiixeen Hoggaamiyayaasha Madasha Qaran.
In uu Xaqiijiyo in xubanaha ergooyinka dooranaya Xildhibaanada Golha Shacbiga ay buuxiyeen shuruudaha ka mid noqosllada ergynimada ee ku xusan Xeerka lagu dhisay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka fleer Dawlado Goboleed ayadoo la raacaya go’aanada Madasha Hoggaanka Qaran.
Isagoo raacaya qorshe hawleedkiisa iyo jedwalka doorashada, ayuu ku dhawaaqayaa taariikhda doorashooyinka 2016.
Wuxuu kor joogtcynayaa in Guddiga Doorashada cc Dawlad Goboleedyadu waafaqay, raacayna hannaanka doorashada ee la isku raacay.
Dhiirigelinta haweenka cc ku aaddan in ay u tartamaan, kana qaybgalaan, ololena ka dhex sameeyaan ergada doorahada ee deegaanadooda.
Taageeridda Guddiga Qaranka ee u ololeeya qadiyadda ka qaybgalka siyaasadda iyo metelaadda haweenka inta lagu guda jiro geedi-socodka doorashada.
Kor-joogtaynta tirinta codadka, xaqiijinta natiijada, iyo ku dhawaaqidda natiijada guud ee kamadambeysta ah ee doorashada.
In ay wixii khilaaf ah cc soo baxa u gudbiyaan Guddiga xalinta khilaafaadka
Guddiga GFHDD wuxuu si joogta ah Madasha Hoggaanka Qaran ugu wargelinayaa dadaalladiisa, wuxuuna weydiisanayaa hagid siyaasadeed ama go’aano siyaasadeed marka loo baahdo si loo xaqiijiyo in hannaanka doorashadu uu guud ahaan noqdo mid isku dheellitiran oo loo wada dhan yahay.
Xubnaha uu ka kooban yahay lye taageerada la stiyo
Guddiga GFHDD waxay iska dhex dooranayaan Guddoomiye iyo ku-xigeen oo midkood dumar yahay, shirkooduna wllxuu ku qabsoomayaa seddex meelood laba meel ( 15 xubnood ) cc tirada guud xubnaha guddiga, waxayna go’aannada ku gaarayaan cod hal dheeri ah.
Qaramada Midoobay iyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay bixinayaan taageerada loo baahan yahay khibradda iyo talooyinka, hadba intii loo baahdo.
Waa in ay 30% ee lacagta khidmadda cc tartameyaasha u isticmaalaan howlaha hirgelinta doorashada 2016